Jiolahy tena rain-dahiny ireo nitsoaka teny Tsiafahy : tonelina nohadian’izy ireo no nivoahan’ireo gadra | NewsMada
Jiolahy tena rain-dahiny ireo nitsoaka teny Tsiafahy : tonelina nohadian’izy ireo no nivoahan’ireo gadra
Randrianarimanana, antsoina hoe Ratelo, Rajoelina Christian, Randriamalala Toky, Razafitsalama Soloniaina, ary Randriamparany David. Ireo izy dimilahy, gadra nitsoaka ny fonjan’i Tsiafahy, ny alin’ny asabotsy hifoha alahady teo. Lavaka (tonelina) sahabo ho 5 metatra nohadian’izy ireo avy ao anatiny no nivoahan-dry zalahy.
Nolavahin’ireo gadra tao Tsiafahy ny tonelina ambanin’ny tany mirefy 5 m nahafahany nisoaka ny alin’ny asabotsy teo. Io ny fanazavana nentin’ny seraseran’ny fitsarana, omaly. Razafitsalama Soloniaina, teraka ny 28 marsa 1989 tao Ambohibary Manjakandriana. Randriamalala Toky Fenosetra Safidy, teraka ny 29 septambra 1992 tao Ankorondrano. Randriamparany David Rolland, teraka ny 2 desambra 1992 tao Befelatanana mipetraka eny Anosimpatrana. Rajoelina Christian Tanteraka teraka ny 20 marsa 1986 tao Analamahitsy ary monina ao Manjakaray. Tafiditra ao anatin’ ny tambajotran-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana iszy efa-dahy ireo. Randrianarimanana na Ratelo, teraka ny 15 desambra 1992 ny farany. Voampanga amin’ny raharaha vonoan’olona izy io.
Araka ny fanazavan’ny talen’ny serasera eny anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana, Napou Jeremy, ity farany antsoina hoe Ratelo izay manam-pahaizana amin’ny fahadiana lavaka noho izy io niasa tamin’ny fitrandrahana safira no anisan’ny niketrika ity tonelina ity. Tsy nanazava kosa anefa ry zareo eo anivon’ny fandraharaha fonja sy ny fitsarana momba ny fitaovana nahafahan’ireo gadra ireo nihady lavaka lalina. Misy angady tafiditra ao an-toerana? Tsy ampy ny fanaraha-maso ireo fitaovana eny am-pelatanan’ireo gadra tena atahorana? Efa ny alahady maraina vao hitan’ny mpiambina ny fahabangan’ireo gadra dimy lahy tafatsoaka ireo. Izy ireo izay voalaza fa jiolahy raindahiny avokoa izao tafatsoaka any anaty fiarahamonina any. “Efa miparitaka ny filazalazana sy ny sarin’izy ireo ary efa manao ny fikarohana ny mpitandro filaminana”, hoy ny fanazavana.